Ku wadista Shatiga Laalista ah
Barnaamijka Kala Duwajinta Rayidka DLS waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo dadka inay dib u helaan liisanka darawalnimada inta ay ka bixinayaan ganaaxyada iyo khidmadaha. Kaqeybgalayaashu waxay lashaqeeyaan shaqaalaha Burlington CJC si ay usameeyaan qandaraas ay kamid yihiin qorshe lacag bixin oo loo soo bandhigo Xafiiska Garsoorka ee Vermont (VJB) si dib loogu eego. Markii ay ogolaato Sarkaalka Dhageysiga ee VJB, Waaxda Gawaarida (DMV) waxaa lagu wargelinayaa in qofku u hoggaansamayo VJB. Shuruudaha dib u dejinta ee DMV waa in sidoo kale la buuxiyaa ka hor inta aan liisanka darawalnimada qofka dib loo dhigin.
Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan hoos u dhigista deynta, qaarna waxay bixin karaan adeegga bulshada iyo / ama inay kaqeybqaataan barnaamij waxbarasho oo loogu beddelayo hoos u dhigidda ganaaxyada iyo khidmadaha lagu leeyahay.
Si loogu qalmo kaqeybgalka DLS, qof waa inuu buuxiyo shuruudaha ganaaxa aasaasiga ah, sida u adeegida mudada ganaaxa ee looga baahan yahay dhibco urursi.
Dadka ka joojintooda hadda ay sabab u tahay DUI ama dembiyo kale oo halis ah xaq uma laha barnaamijkan.
Ka qaybgalayaashu waa inay:
Kaqeybgal kulanka ugu horeeya shaqsiga shaqaalaha DLS weecinta Maxkamada si aad u baarto:
Sababaha liisanka looga joojiyay,
Tallaabooyinka loo baahan yahay si dib loogu soo celiyo liisanka darawalnimada,
Sidee loo bixiyaa ganaaxyada iyo khidmadaha.
Buuxi dhaarta dhaarta oo sharraxeysa dakhligooda shaqsiyeed iyo biilasha.
Samee oo la soco qorshe lagu bixinayo ganaaxyada iyo khidmadaha lagu leeyahay Gobolka Vermont. Qorshahan waxaa ku jiri kara shuruudo kale, sida adeegga bulshada.
Ka qaybgal kulamada dabagalka ah sida loogu baahdo.
Bixiso bixinta hore $ 25 ee khidmadda barnaamijka ah $ 175. Dheelitirka ujrada ayaa lagu daray qorshaha lacag bixinta waana la dhimi karaa iyadoo lagu saleynayo xaaladda dhaqaale ee qofka.
Marka la ansixiyo qandaraaska iyo qorshaha lacag bixinta ee Xafiiska Garsoorka ee Vermont - iyo ku qanacsanaanta shuruudaha kale ee DMV (sida tijaabada wadada, helitaanka caymiska gawaarida ee SR-22, daryeela wixii ganaax ah taraafikada ee lagu leeyahay gobolada kale, iwm) - kaqeybgalayaasha barnaamijka dib ayaa loo soo celin doonaa liisankoodii darawalnimo.
Ka gaabinta in la raaco qandaraaska, oo ay ku jiraan qorshaha lacag bixinta, waxay keenaysaa in laga joojiyo ruqsadda darawalnimada qofka. Dhameystirka guuleysta waxaa loola jeedaa xadgudubyada madaniga ah ee lasoo dhaafay looma xisaabtami doono eedeymo dambi oo aad u daran.
Wixii su'aalo iyo walaac la xiriira DLS, kala xiriir Maghon Luman mluman@burlingtonvt.gov ama 802-865-7155.